Jamie Carragher oo rumeysan in Kooxda Liverpool aysan ku guuleysan doonin horyaalka haddii aysan halkaan arrin sameynin – Gool FM
(Liverpool) 05 Jan 2021. Jamie Carragher ayaa ka walwalsan qaab ciyaareedkii dhawaa ee Kooxda Liverpool kaddib guuldarradii ka soo gaartay xalay Southampton, wuxuuna sheegay inaysan ku guuleysan doonin horyaalka haddii aysan la soo wareegin daafac dhexe bishan Janaayo.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jurgen Klopp ayaa guuldarro 1-0 kala soo laabtay Southampton oo ay booqatay, taasoo Manchester United fursad u siinaysa inay saddex dhibcood oo nadiif ah ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League haddii kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer ay garaacaan Burnley kulankooda isbuuca soo aaddan.
Liverpool ayaa u diyaarisay kabtankeeda Jordan Henderson inuu ka ciyaaro bartamaha daafaca dhexe ciyaartii ay guuldarradu ku soo gaartay garoonka St Mary, laakiin Carragher ayaa sheegay in kooxda Tababare Klopp aysan noqon doonin koox haysata horyaal haddii aysan suuqa kala imaan bishaan daafac dhexe.
Carragher oo la hadlayey Sky Sports kaddib kulankii Southampton ayaa yiri: “Ma arki karo Liverpool oo ku guuleysanaysa horyaalka haddii aysan soo iibsan daafac dhexe.
“Waxaan sidaa u iri kaddib ciyaartii Everton markii Virgil van Dijk uu dhaawacmay, laakiin waxaan u maleynayaa inay runtii tahay su’aal adag haddii aysan cidna keenin.
“Xaqiiqda uu Jordan Henderson ku ciyaaray daafaca dhexe wax badan uma qaban doono labada wiil ee keydka fadhiya (Rhys Williams iyo Nathaniel Phillips) iyo kalsoonidooda haddii ay haystaan labo khadka dhexe oo halkaas ka ciyaara, Henderson ma’ahan daafac dhexe, wax fiican ayuu qabtay, laakiin booskiisa maahan.” ayuu hadalkiisa ku daray Carragher.
Daafaca Kooxda Liverpool ee Van Dijk ayaa waqti dheer dhaawac garoomada uga maqan, waxaana sidoo kale Reds ka dhaawacmay daafacyadii buuxin lahaa booskiisa ee Joe Gomez iyo Joel Matip.
Kooxda Barcelona oo dib u dhigtay tababarkeeda kaddib markii labo ka mid ah laga helay Korona Fayras